Sida loo isticmaalo Magnifier iPhone dib loo habeeyay gudaha iOS 14 | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo isticmaalo IPhone Magnifier dib loo habeeyay gudaha iOS 14
Sida loo isticmaalo IPhone Magnifier dib loo habeeyay gudaha iOS 14
0 Daqiiqado 3 ayaa akhriyay
Muraayad weynaynta dhijitaalka ah oo wax ku ool ah oo lagu beddelo muraayadaha wax-akhriska ayaa ku dhex aasan iPhone sanado badan. IOS 14, waxay noqonaysaa mid aad u fudud in la helo. Waxaana jira astaamo cusub oo cajiib ah.
Waa kan sida loo isticmaalo Magnifier-ga iPhone. Iyo iPad, sidoo kale.
Magnifier runtii wuu ku badbaadin karaa markaad dibadda wax ka cunayso
Tani waa qalab anfacaya qof kasta oo da' gaar ah leh. Maskaxdaadu sidii hore way ka fiican tahay, laakiin indhahaagu sidii hore uma fiiqan yihiin. Waxa aad arkaysaa in aad liifayso si aad isugu daydo in aad akhrido far yar oo ku dhex jira makhaayadaha iftiinka yar yar.
Magnifier wuxuu halkan u joogaa inuu ku caawiyo. Waxay isticmaashaa kamarada qalabkaaga moobaylka si ay ugu fududaato in la arko farta itty-bitty. Dabcan, taa beddelkeed waxaad ku samayn kartaa muraayadaha akhriska… haddii aad xasuusato inaad qaar soo qaadato. Ka fakar doorashada Apple waa gurmad degdeg ah.
Run ahaantii, way yara dhib badan tahay. Ma aad akhrin doontid buug dhan sidan ilaa aad si gaar ah quus uga taagan tahay mooyaane. Laakiin waa badbaado markaad isku daydo inaad akhrido sharaxaadda cuisses de grenouilles ee bistro shumaca shiday.
Ha ku khaldin tan Apple's Zoom, kaas oo balaadhinaya qaybaha shaashadda iPhone/iPad si loo akhriyo fudud. Magnifier waxaa loogu talagalay akhrinta qoraalka adduunka dhabta ah.
Aad u fudud in la helo
IOS 14, Magnifier waa app, sida Mail ama Safari. Waxay dul fadhidaa shaashadda guriga oo aanad u badnayn inaad ilduufo.
Sifadan waxa kaliya oo lagu heli karaa qaybta Helitaanka ee Dejinta. Taasi waa meel macquul ah, laakiin waxay si qoto dheer ugu aasantay menu-yada halkaas oo aanay dadku u badnayn inay si qarsoodi ah ugu dhex ordaan.
Taasi waxay tidhi, isticmaalayaasha muddada dheer ee habkan ayaa laga yaabaa inay ku faraxsan yihiin inay bartaan inaad weli u dejisan karto sidii Gaaban Gaaban, si la mid ah tan iyo iOS 10. Haddii aad doorbidayso ikhtiyaarkan inaad si fudud uga furto Magnifier shaashadda guriga, u tag Dejinta> Helitaanka> Jidka Gaaban ee Helitaanka> Magnifier. Kadib seddex jeer dhagsi badhanka dhinaca ee iPhone ama iPadka si aad u bilowdo weynaynta. Apple waxay leedahay sharraxaad muuqaal ah oo ku saabsan habkan.
Magnifier waa ka badan yahay muraayadda weynaynta dhijitaalka ah
Magnifier IPhone wuxuu si fiican u qabtaa shaqada aasaasiga ah. Fur, ku dhufo kamarada gacanta waxaad rabto inaad akhrido, oo waxaad ku jirtaa ganacsi.
Haddii aadan weli soo saari karin qoraalka yar ee ku qoran cawl madow oo ku jira liiska cawlan khafiifka ah, waxaa jira sawir qaade si aad u sii weyneyso waxa aad eegayso. Makhaayado aan iftiin lahayn, shid tooshka iPhone
Kuwani waa aasaaska. Laakiin waxaa jira xoogaa dheeri ah oo loogu talagalay dadka u baahan. Waxaad hagaajin kartaa isbarbardhigga, taas oo sahlaysa in la arko qoraalka ku daabacan midab aad ugu dhow midabka asalka. Waxaad kordhin kartaa iftiinka sawirka, taas oo mararka qaarkood ka caawisa iftiin yar.
Haddii kuwani ay qaban waayaan shaqada, waxaad la soo bixi kartaa qoryaha waaweyn. Shaandheeyayaashu waxay rogi karaan midabada, markaa qoraalka madow-ka-caddaan waa caddaan-madow. Ama waxaad u bedeli kartaa midab cawlan oo rogan, markaa qoraalka cad-ka-cas waa qoraal madow-ka-cad. Waxaa jira midabyo kale oo la isku daray, oo dhamaantood loogu talagalay inay dadka ka caawiyaan inay si fiican u arkaan.
Iyo Magnifier weli si fiican looma samayn. Waxaad si ku meel gaar ah u qaadi kartaa sawirada waxa shaashadda ku jira si ay u fududaato in wax loo akhriyo. Oo laga bilaabo iOS 14, barnaamijkani wuxuu hayn karaa sawirro badan. Tani way ku anfacaysaa haddii aad isku dayayso inaad go'aansato inta u dhaxaysa pâté de foie gras iyo hamburgerka. Sawiradan laguma kaydiyo abka Sawirada - waa ku meel gaadh
Ha ku dhibtoon inaad aragto qoraal yar adigoon muraayad akhrin. Kaliya soo saar abka Magnifier
Sawirka: Ed Hardy/Cult of Mac
feature Bonus: Telescope
Muraayad weynayntu waxay leedahay kala duwanaansho ilaa cag ah. Ma aha telescope. Laakiin Magnifier iPhone runtii is telescope. Waxaad u isticmaali kartaa inaad ku ballaadhiso walxaha fog si aad si fudud ugu arki karto.
Waxay u badan tahay in aanay bedeli doonin indhahaaga indhaha, in kastoo. Habkani waxa uu samaynayaa zoom dhijitaal ah, ma aha zoom indhaha. Taasi waa hab qurux badan oo lagu yiraahdo dhammaan iPhone-kaagu wuxuu sameyn karaa waa inuu ka dhigo pixels ka weyn. Mararka qaarkood taasi waxay sahlaysa in la arko walxaha fog. Laakiin had iyo jeer maaha.
Xayeysiiska OTT waa fursad tafaariiqleyaasha la aasaasay
10-ka Xeeladood ee Suuqgeynta ugu Wanaagsan ee lagu Gaaro Ardayda Kulliyada
saac ka hor 23
saac ka hor 24